Irree hiyyummaa seenaa gochuuf tattaafataa jiru
Irree hiyyummaa seenaa gochuuf tattaafataa jiru Featured
Daraggootni dhagaa koobilii diriirsuun jireenyasaanii mo’atan (Suurri Waasihuun Takleetiin)
Babal’achuun hojidhabdummaa rakkoolee hawaasummaa lammiilee qaqqabsiisuun alatti guddina dinagdee biyyattii ariifataafi itti fufiinsa qabu lafa qabsiisuuf hudhaa ta’uunsaa kan hubatamuudha.
Keessumattuu rakkooleen hojidhabddummaa biyyoota Afrikaa caalaatti hubaa kan jiru yemmuu ta’u, jiruufi jireenya dargaggootaa qormaata keessa galchuurra darbee godaansa seeraan alaa hammeessaa akka jiru ragaaleen ni mul’isu. Itoophiyaa keessattis rakkoon kun haalaan calaqqisaa kan ture yoo ta’u, yeroo ammaa sosochii mootummaan taasisaa jiruun garuu bu’aaleen galmaa’aa jiran jajjabeessaadha.
Rakkoolee hojidhabdummaa dargaggootaa Magaalaa Finfinnee furuuf tattaaffiin taasifamaa jiruun dargaggoonni hedduu ijaarsa daandii hojjechuuf dhagaa kobilii diriirsuu(koblestone) irratti bobba’an miira ofitti amanamummaa horachuurra darbee jiruufi jireenyasaanii fooyyeffachuu danda’uunsaanii akka fakkeenyaatti kan ka’uudha.
Dargaggoota hojidhabeeyyii akka magaalichaatti jiran sakatta’uun leenjiin hojii ogummaa garagaraa kennamaa kan jiru yoo ta’u, leenjichi ogummaa dargaggoonni itti of jijjiiruu danda’an kan taasisedha.
Dargaggoonni filatamuun leenjii dhagaa koobilii diriirsuurratti bobba’an hedduunsaanii ogummaa kanaan dura hinqabne horachuun hojii akka ummatan ta’uu kan himan Ittaanaa Diinii Mana Barumsaa Teeknikaafi Ogummaa Magaalaa Finfinnee Obbo Taklaayi Gabrayohaannisidha. Itoophiyaa keessatti aadaan hojii ummachuu laafaa ta’uu kan himani Obbo Taklaayi, yeroo ammaa sosochii mootummaan taasisaa jiruun dargaggoonni hedduu fayyadamoo ta’aa jiruu, jedhu.
Dargaggoonni leenjii fudhatan kunneen madaallii gahumsa ogummaa fudhachuun hojiitti akka bobba’aniif xiyyeeffannoon hedduu kennamee irratti hojjetamaa akka jiru kan himanii, kanneen ogummichatti laafanii argaman ogummaasaanii akka fooyyeffataniif dabalataan leenjii akka argatan taasifameeraa jedhu. Kunimmoo humna dargaggootaa leenjiirratti fixuuf osoo hintaane hojii qulqullina qabu akka hojjetaniif kan yaadame ta’uu dubbatu. Leenjichi yeroo qabame keessatti dhumuu dhabuunsaa leenjitoota biratti komii akka kaase himanii, gahumsi leenjitootaa osoo hinbilchaatiin ragaa kennuun waan hindanda’amneefidhaa jechuun sababeessu. Leenjii ogummaa isaaniif kennamaa jiruttis dargaggoonni kan gammadan yoo ta’u, miira ofitti amanamummaa isaan keessatti uumuusaas ibsu.
Dargaggoota leenjicha fudhatan keessaa Alii Birhaanuu isa tokko yoo ta’u, leenjichi miira eeggatummaa jalaa akka bahaniif karaa saaquusaa ibseera.
Dargaggoo Aliin barnootasaa kutaa kudhan erga xumureen booda hojii dhabee yeroo dheeraaf akka taa’e yoo himu, deggarsa argateen ogummaa dhagaa koobilii diriirsuu barachuusaatti gammadee jira. Xumura leenjichaattis liqaa mootummaan kennutti fayyadamuuf hiriyyootasaa waliin gurmaa’uun jireenyasaa fooyyessuuf qophii xumureera.
Hojiin ogummaa miira ofitti amanamummaa kan nama gonfachiisuufi miira hirkattummaa ammoo kan dhabamsiisu waan ta’eef, jajjabaachuu mala kan jedhu dargaggoon kun, kanneen hafanis ogummicha barachuurratti xiyyeeffachuu akka qabanidha, kan dubbate.
Kanaan dura aadaa hojii ummachuu wallaaluun dargaggoota hedduu araada hintaaneef saaxiluu kan hime dargaggoo Aliin, yeroo ammaatti ogummaa argatan kanaan fayyadamtummaasaanii ijaan arguu danda’uusaanii eereera.
Walumaagalatti, leenjiin ogummaa dargaggoota hoji dhabeeyyii magaalaa Finfinneef kennamaa ture miira ofitti amanamummaa dargaggootaa kan cimsuurra darbee tulluu hiyyummaa kan diigu waan ta’eef, sosochii gama kanaan taasifamu itti fufiinsaan cimsuun barbaachisaadha.
Torban kana/This_Week 10587
Torban darbe/This_Month 96944
Guyyaa mara/All_Days 1435367